टी–२० क्रिकेट श्रृंखला : नेपाल ४ विकेटले विजयी - Namasteholland, News, Information and Technology
टी–२० क्रिकेट श्रृंखला : नेपाल ४ विकेटले विजयी
१९ माघ २०७५, शनिबार १०:२२0257
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बिरुद्धको दोस्रो टी–२० खेलमा नेपालले युएईलाई ४ विकेटले पराजित गरेको छ ।
विजयी भएसँगै नेपालले सिरिजमा १–१को बराबरी गरेको छ । शुक्रबार भएको खेलमा यूएईले दिएको १०८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ३ बल बाँकी छँदै ६ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गर्न सफल भएको हो ।
नेपालको जितमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी र पवन सर्राफको साझेदारी महत्वपूर्ण रहेको थियो । पवन १८ रन बनाए आउट भए । यसैगरी दीपेन्द्रसिंह ऐरी ४७ रनमा नट आउट रहे ।
खराब शुरुआत गरेको नेपालले पहिलो ओभरको पहिलो बलमै पारस खड्कालाई गुमाएको थियो । टिमको खातामा ९ रन भएका बेला अर्का ओपनर प्रदीप ऐरी ८ रन बनाएर आउट भए । तेस्रो विकेटको रुप्मा ज्ञानेन्द्र मल्ल ७ रन बनाउँदे पेभेलियन फर्किएका थिए । पारस आउट भएलगत्तै क्रिजमा आएका करण केसीले २३ बल खेल्दै २० रन बनाए ।
ज्ञानेन्द्रसँग २६ रनको साझेदारी गरेका करणले दुई चौका र एक छक्का प्रहार गरेका थिए । डेब्यु टी–२० मा अर्धशतक बनाउँदै विश्वकै कान्छो खेलाडी बनेका सन्दीप जोरा शुक्रबारको खेलमा भने चल्न सकेनन् ।
चार बल फेस गरेका सन्दीप १ रन बनाउँदै आउट भएका थिए । पाँच विकेट गुमाँउदा ४६ रन बनाएको नेपालका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरी र पवन शर्राफले ५५ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
टस जिति पहिल ब्याटिङ गरेको युएई १९.२ ओभरमा अल आउट हुँदै १०७ रन बनाएको थियो । यूएईलाई सस्तैमा समेट्न नेपालका अभिनास बोहराले सर्वा्धिक तीन विकेट लिँदा सोमपाल कामी, करण केसी र सन्दिप लामिछानेले दुई दुई विकेट लिए । नेपालले शुक्रबार ६ जना बलर लगाएकोमा पवन शर्राफ र ललितनारायण राजबंशी भने विकेट विहीन बने ।
पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा सोमपालले अस्फाक अहमदलाई आउट गर्दै नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाएका थिए । सोमपाललेनै तेस्रो ओभरको तेस्रो बलमा गुलाम सबेरलाई पेभेलियन पठाउँदै नेपाललाई सुरुमै दुई विकेट दिलाए ।
सन्दिप लामिछानेले नेपाललाई तेस्रो र चौथो सफलता दिलाएका थिए । सन्दीप लामिछानेले छैटौं ओभरमा ब्यक्तिगत पहिलो ओभर लिएर आएका सन्दीपले पाँचौ बलमा शैमान अनवरलाई आउट गरे । अनवर ११ बलमा १४ रन बनाएर खेलिलरहेका थिए ।
अन्तिम बलमा पनि सन्दिपले व्यक्तिगत दोस्रो विकेट हात पारे । दोस्रो विकेटको रुपमा मोहमद उस्मानलाई आउट गरेका थिए । करण केसीले नेपाललाई पाँचौ सफलता दिलाए ।
करणले १०.३ ओभरमा यूएईका मोहमद बोता आउट भएका छन् । बोता र सिपी रिजवानका बीचमा २४ रनको साझेदारी तोड्न सफल भए । बोता ११ रन बनाएर आउट भएका हुन् ।
छैटौं विकेटको रुपमा अभिनास बोहराले अमिर हायातलाई आउट गरेका थिए । अभिनास बोहराले सातौं सफलता दिलाएका थिए । १४.३ ओभरमा उनले मोहमद नाभिदलाई ज्ञानेन्द्र मल्लको हातबाट क्याच आउट गराएका हुन् ।
आठौं बिकेटको रुपमा नेपालले रन आउटको रुपमा हात पारेको थियो । यूएईका मोहमद सुल्तान ४ रन बनाएर रन आउट भए पछि नेपालले आठौं सफलता हात पारेको थियो । ललितनारायण राजबंशीको बलमा दीपेन्द्रसिंहले रन आउट गरे ।
आफ्नो स्पेलको अन्तिम ओभर लिएर आएका अभिनास बोहराले नेपाललाई नवौं सफलता दिलाएका छन् ।
उनले १८.२ ओभरमा ४४ रन बनाएर खेलिरहेका यूएईका ओपनर सिपी रिजवानलाई क्याच आउट गराए । अभिनासले योसँगै तीन विकेट लिन सफल भए । अन्तिम ओभर लिएर आएका करण केसीले जोहर खानलाई आउट गरेपछि यूएईको पारि १०७ रनमा समेटिएको थियो ।
३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०९:५४0990
यूएईलाइ हराउदै ओडीआईमा नेपाल बिजयी…
१४ माघ २०७५, सोमबार १५:५६0243
२५ श्रावण २०७६, शनिबार १०:३६0245
Hey Buddy!, I found this information for you: "टी–२० क्रिकेट श्रृंखला : नेपाल ४ विकेटले विजयी". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a5%a8%e0%a5%a6-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%83%e0%a4%82%e0%a4%96%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%a8/. Thank you.